आइपिएलमा सस्तो प्रदर्शन गरेका १० महँगा खेलाडी | Hamro Khelkud
आइपिएलमा सस्तो प्रदर्शन गरेका १० महँगा खेलाडी
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय फेन्चाइज लिग हो । आइपिएलमा खेलाडीले नाम र दाम राम्रो कमाउँछन् । अक्सनमा कुनैपनि टोलीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खेलाडीलाई टोलीमा अनुबन्ध गर्ने गर्छन् ।
आफूलाई आवश्यक खेलाडी अर्को टोलीलाई पनि छ भने अक्सनमा महँगो मूल्य खर्चिनु पर्ने हुन्छ । एक टोलीलाई आवश्यक खेलाडी अन्यलाई छैन भने स्टार खेलाडी पनि सस्तैमा अनुबन्ध हुनुपर्ने हुन्छ । आइपिएलको अक्सन बजारमा करोडको मूल्यमा खेलाडी टोलीमा भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ ।
पैसा भन्दा पनि टोलीलाई खेलाडी आवश्यक हुँदा करोडौं मूल्य खर्चिन पछि पर्दैनन् । केहि खेलाडीले मूल्य अनुसार प्रर्दशन गर्छन् भने कोहीले अपेक्षा विपरित प्रर्दशन गदछन् । अक्सनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढि हुँदा क्षमता भन्दापनि बढी मूल्य पाउन सक्छन् । आफ्नो समस्या समधानको लागि लिएको खेलाडीले अपेक्षा अनुसार प्रर्दशन गर्न सकेन भने कुनैपनि टोलीले राम्रो प्रर्दशन गर्न सक्दैन ।
आइपिएल २०२० का १० महँगा फ्लप खेलाडी र तिनिहरुको प्रर्दशन यस प्रकार छ ।
१. सुनिल नारायण (कोलकाता)
कोलकाता नाइट राइडर्सका अलराउन्डर सुनिल नारायणको प्रर्दशन यस सिजनमा कमजोर रह्यो । टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य नारायणको यो सिजनमा ब्याट र बल दुवै चल्न सकेन । सन् २०१८ र २०१२ का आइपिएलका मोष्ट भ्यालुबल खेलाडी अवार्ड पाएका नारायणले बलिङमा आइपिएल करिअरकै खराब प्रर्दशन गरे । उनले १० खेलमा ५ विकेट मात्रै लिन सके ।
नारायणले ब्याटिङतर्फ कुल १ सय २१ रन बनाए । जसमा उत्कृष्ट ६४ रन पनि सामेल छ । कोलकाताले नारायणलाई १२ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको थियो । नारायणले ६ खेलमा दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध उनले आबूधाबीमा ६४ रनको इनिङ खेलेका थिए । उनले ६ खेलमा विकेटबिहिन बनेका थिए ।
२. ग्लेन म्याक्सवेल (पन्जाब)
पन्जाब यस सिजनमा लिग चरणबाटै बाहिरिनुमा अष्ट्रेलियाका अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेलको खराब प्रर्दशन पनि एक कारण रह्यो । तल्लोक्रम ब्याटिङ समस्या समधानकै लागि भनेर म्याक्सवेललाई पन्जाबले अक्सनमा १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ खर्चेको थियो ।
तर म्याक्सवेलले १३ खेलमा १ सय ८ रन मात्रै बनाए । जसमा ३२ रन उच्च रह्यो । उनले कुनैपनि छक्का प्रहार गर्न सकेनन् । कुल ९ चौका मात्रै प्रहार गरेका थिए ।
३. शेल्डन कटरेल (पन्जाब)
वेस्टइन्डिजका तीव्र गतिका बलर शेल्डन कटरेलको प्रर्दशन पनि खराब रह्यो । कमजोर तीव्र गतिको बलिङ युनिट बलियो बनाउन पन्जाबले कटरेलमाथि अक्सनमा ८ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ खर्चेको थियो । तर उनले ६ खेलमा ६ विकेट लिए । इकोनमी ८.८० को रह्यो ।
कटरेलको खराब प्रर्दशनमा आधा भन्दा बढी खेलमा पन्जाबले बेन्चमा राखेको थियो । कटरेलले राम्रो प्रर्दशन गर्न सकेको भए पन्जाबले प्ले अफमा स्थान बनाउन सहज हुन सक्थ्यो ।
४. आन्द्रे रसेल (कोलकाता)
कोलकाता तथा वेस्टइन्डिजका अलराउन्डर आन्द्रे रसेलको प्रर्दशन यो वर्ष खराब रह्यो । गत वर्षका मष्ट भ्यालुबल खेलाडी अवार्ड पाएका रसेलले १० खेलमा ६ विकेट लिदा कुल १ सय १७ रन मात्रै बनाउन सके । जसमा उत्कृष्ट २५ रन रह्यो । कोलकातामा रसेलको मूल्य ८ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ छ ।
५. क्रुनाल पान्ड्या (मुम्बई)
स्पिन अलराउन्डर कु्रनाल पान्ड्याको प्रर्दशन यस सिजनमा राम्रो हुन सकेन । मुम्बई इन्डियन्सले उच्च प्रर्दशन गरि रहँदा क्रुनालले १५ खेलमा १ सय ८ रन बनाएका छन् भने ६ विकेट मात्रै लिन सके । प्रमुख स्पिनरको रुपमा रहेपनि उनले लगातार कमजोर प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।
क्रुनालले कमजोर प्रर्दशन गरेपनि अन्य खेलाडीले उच्च प्रर्दशन गर्दै जित हात पारि रहेको हुँदा आलोचित हुनु परेको छैन । क्रुनालको मुम्बईमा पारिश्रमिक एक सिजनको ८ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ छ ।
६. नाथन कुल्टर नाइल (मुम्बई)
अष्ट्रेलियाका अलराउन्डर नाथन कुल्टर नाइलमाथि गत अक्सनमा मुम्बईले ८ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चेको थियो । तर नाइलको प्रर्दशन भने कमजोर छ । उनले ६ खेलमा ३ विकेट लिएका छन् । सुरुवाती समय चोटका कारण बेन्चमा रहेपनि मुम्बईले नाइललाई पछिल्लो खेलमा पहिलो रोजाईमा मैदान उतार्दै आएको छ । ब्याटिङतर्फ २५ रन मात्रै बनाउन सकेका छन् ।
७. दीनेश कार्तिक (कोलकाता)
कोलकाताका विकेटकिपर समेत रहेका दीनेश कार्तिकको प्रर्दशन पनि यस सिजनमा खराब रह्यो । ब्याटिङ राम्रो बनाउन कप्तानी ओईन मोर्गनलाई दिएका कार्तिकले १४ खेलमा १ सय ६९ रन बनाए । औसत १४.८ रहँदा उत्कृष्ट ५८ रह्यो । कोलकाताले कार्तिकलाई एक सिजनको पारिश्रमिक ७ करोड ४० लाख भारतीय रुपैयाँ दिने गर्दछ । कोलकाताको प्रमुख ब्याट्सम्यानको रुपमा खेलेपनि प्रर्दशन भने खराब रह्यो ।
८. केदार जाधव (चेन्नई सुपर किंग्स)
चेन्नई सुपर किंग्सका कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको पहिलो रोजाईमा परेपनि जाधवले प्रर्दशन खराब गरे । ७ करोड ८० लाख पारिश्रमिक पाउने जाधवको प्रर्दशन भने ८ खेलमा ६२ रन मात्रै बनाउन सके । उनको स्ट्राइकरेट जम्मा ९३ को रह्यो । आगमी सिजनमा जाधवलाई चेन्नईले टोलीबाट फकुवा गर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।
९. पियुष चावला (चेन्नई)
चेन्नईका स्पिनर पियुष चावलाको प्रर्दशन पनि खराब रह्यो । उनले ७ खेलमा ६ विकेट लिदा इकोनमी ९ भन्दा माथि रह्यो । चेन्नईले चवलालाई अक्सनमा ६ करोड ७५ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्चेको थियो । तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने क्षमता भएपनि उनले चेन्नईलाई कुनै खेलमा त्यसअनुसार सहयोग गर्न सकेनन् ।
१०. शिवम् दुबे (बेंगलोर)
बेंगलोरले अक्सनमा दुबेलाई ५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चेको थियो । दुबे जारी सिजनमा बेंगलोरबाट ११ खेलमा ४ विकेट लिए । ब्याटिङतर्फ १ सय २९ रन मात्रै बनाउन सके । औसत १८ को रहँदा उच्च प्रर्दशन २७ रन रह्यो ।